Maalinta: Sebtember 5, 2019
Bidixanka Volkswagen ee Bursa
Bayaanka ugu horeeya… Raiisel wasaare kuxigeenka AK Party Bursa kuxigeenka iyo gudoomiyaha guddiga dib u eegista xuquuqda aadanaha ee baarlamaanka Hakan Cavusoglu ayaa lasoo dhaafay. Waxaan sidoo kale ku dhawaaqnay caddeynta tilmaanta 27 Febraayo 2019: [More ...]
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu sameeyey bayaanno muhiim ah oo ku saabsan qadka nidaamka tareenka kaas oo kordhin doona raaxada gaadiidka magaalada. Duqa Magaalada Büyükkılıç, Isbitaalka Belsin-hirehir oo ay dhisi doonto Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
34 Gawaarida Xamuul ee Dhaawacmay oo Ay Iskuxirtay Tareen Ku Yaal Japan
Jabaan gudaheeda, gaari xamuul ayaa ku dhacay tareen meel isgoys tareen ah. Ugu yaraan 34 qof ayaa ku dhaawacmay shilka. Shilka ayaa ka dhacay 11.40 waqtiga maxalliga ah maanta oo ku yaal Yokohama, oo u dhow caasimadda Japan, Tokyo. Gaari xamuul ah, [More ...]
Laba hindise muhiim ah ayaa la baajiyay maalintii is casilaada Maareeyihii Guud ee Shirkadda Korontada ee Istanbul iyo Hawlaha tunnel (IETT), Ahmet Bagis, laf dhabarta gaadiidka dadweynaha ee Istanbul. Wadarta IETT [More ...]
Qandaraaska Marxaladda Kowaad ee Mashruuca Maraya Konya Metro Bishan ayaa La Siiyey Bishan
Ugaur Ibrahim Altay, Duqa Magaalada Konya ee Magaalada Magaalo Weyn, wuxuu la kulmay wakiilo ka kala socda ururada saxaafadda ee Konya, wuxuuna qiimeeyay ajendaha. Duqa magaalada Altay wuxuu cadeeyay in qandaraaska wejiga koowaad ee Mashruuca Konya Metro la qaban doono bishaan. 1 [More ...]
47 Milyan Euro oo loogu talagalay Dhismaha Degdegga Degdegga ah ee Odessa
Farriin uu soo diray Odessa Kuxigeenka Duqa Magaalada Pavel Vugelman, Bankiga Yurub ee Dib-u-dhiska iyo Horumarinta (EBRD) wuxuu u qoondeeyay Odg 47 milyan euro si loogu kharash gareeyo dhismaha xawaaraha dheereeya. Odessa [More ...]
World Championship stadian, Turkey in la dhiirrigeliyo Adduunka
Iyada oo la raacayo wareegtada Madaxtooyada, 6-7-8 waxaa lagu qaban doonaa Afyonkarahisar markii labaad bisha Sebtember. Maamulka Afyonkarahisar iyo kooxaha Dawlada Hoose ee Afyonkarahisar waxay u shaqeeyaan hay'ad aagga ah xNUMX kun oo mitir oo laba jibaaran [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Guler, wadada xeebta Badda Madow ee ku xigta bedelka labaad ee buundada Melet Bridge ayaa baaritaano ka sameysay. Bedelka labaad ee Buundada Melet [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dayactirka wadooyinka iyo howlaha dayactirka ee magaalada oo dhan. Xaaladda guud, degmada Kartepe ee Sarımeşe Neighborhood Arpalık Street kaabayaasha iyo shaqooyinka qaab dhismeedka cusub ayaa la cusbooneysiinayaa. Waaxda Sayniska [More ...]
06 jimcaha, 2019: 20 jimcaha: 45 U2021 isreebreebka European Championship, kaasoo ah kulanka kooxda Qaranka Star, kaas oo lagu ciyaari doono markii ugu horeysay garoonka Kocaeli. [More ...]
Dawlada Hoose ee Izmir waxay martigelin doontaa Bandhiga Caalamiga ah ee Izmir inta u dhaxaysa 6 iyo 15 Sebtember. Sannadkan 88. tirinta Bandhigga Caalamiga ee Izmir, kaas oo isu diyaarinaya inuu albaabadiisa furo [More ...]
Erciyes Moto Fest wuxuu ku dhammaaday final cajiib ah
Turkey ayaa Erciyes 40 dhameystirtay Baaskiilka Festival isu keena boqolaal shirwaynaha faras birta kaga keceen oo gobolladii oo kala duwan. Dhacdada, oo ku darmaysa jawi ka duwan kan Kayseri, ayaa loo caleemo saaray riwaayadda Kurtalan Express. Degmada Kayseri Weyn, Erciyes [More ...]